“Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakàn’Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo,ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy” (Jaona 3.5-6).
“Izay mino ny Zanaka no manana fiainana mandrakizay” (Jaona 3.36).
Tsy nisy nisafidy ny ho teraka tetỳ an-tany isika; ny mifanohitra amin’izany kosa, ny fahaterahantsika ao amin’ny Fanjakàn’Andriamanitra dia miankina amin’ny fanekentsika. “Tsy maintsy hateraka indray ianareo” (Jaona 3.7).
“Mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay velona, fa ho an’Izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy” (dia i Jesoa Kristy) (2 Korintiana 5.15).
“Fa Kristy no anton’ny ahavelomako”, hoy ny apostoly Paoly (Filipiana 1.21).
“Fa raha tsy mino ianareo fa Izaho no Izy, dia ho faty amin’ny fahotanareo ianareo” (Jaona 8.24).
“Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo” (Apokalypsy 14.13).
...hitsanganana amin’ny maty
“Fa avy ny andro izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony; dia hivoaka izy: izay nanao tsara dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana; fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny fitsanganana ho fahamelohana” (Jaona 5.28-29).
Ny fitsanganana ho fiainana dia ampanantenaina an’ireo izay nahazo ny fiainana mandrakizay noho ny fahasoavan’Andriamanitra, ka noho izany dia voadio tamin’ny fahotany. Rehefa maneno, tsy ho ela intsony, ilay trompetran’ny Tompo Jesoa Kristy, dia tsy maintsy haverin’ny fahafatesana Aminy ireo olony. Hivoaka avy ao am-pasana izy ireo, hitafy vatana feno voninahitra, ary hakarina “hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka” mba “ho any amin’ny Tompo mandrakariva” (1 Tesaloniana 4.17).
Fomba roa...manamarika sokajin’olona roa, ary roa ihany. Aiza amin’ireo no hisy anao?
IMEAF France SV 017MA
Deux manières de naître, vivre, mourir, ressusciter
Fomba roa ahaterahana,
iainana, hahafatesana, hitsanganana amin’ny maty